Mmanụ Plant N'ihi Recycling Black Engine Oil in ...
Black Motor Oil imu Machine
Waste mmanụ distillation refainari osisi
Black Engine Oil imegharị ihe maka iji na Yellow isi mmanụ igwe
FOB Price: US $ 0,5 - 9,99999 / Set / Ibe
Min.Order ibu: 1Set / Ibe
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Set / iberibe kwa afọ
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: L / C, T / T, Western otu
A n'obi Thunder Oil Ọgwụgwọ Company:
Anyị na-Nlụpụta nile di iche iche nke mmanụ imegharị ihe maka iji ígwè.
Mgbe 10 afọ nke na-amụ n'efu mmanụ imegharị ihe maka iji, anyị na-eto teknụzụ na nkà kwee efọd ahụ, anyị nwere ike ime ka ihe niile nkọwa nke igwe zuru okè. Na anyị nwere ike chepụta ígwè ọrụ dị ka ndị ahịa 'pụrụ iche chọrọ.
Ogologo oge nke àgwà akwụkwọ ikike, and15-30 ụbọchị nke free echichi na free ọzụzụ onsite. (Nnukwu igwe na ogologo free echichi oge, biko kpọtụrụ na anyị na ahịa ọrụ, ma ọ bụrụ na i nwere obi abụọ ọ bụla)
naanị consumable nke a igwe bụ mkpali, maka otu ton n'efu mmanụ, ya na-eri gị 5USDollar.
H eri Sources:
ahịa nwere ike họrọ ọkụ eletrik, coal, gas, dizel ka kpo oku na isi mmalite.
Nkọwa Of Regenerated Diesel Oil: (please contact with our sales for the details):
Flash mgbe (emechi)
Ọxịdashọn kwụsiri ike, na ngụkọta unyi anaghị agbasa
Previous: Black Motor Oil imu Machine
Next: Mmanụ Plant N'ihi Recycling Black Engine Oil n'ime lube Base mmanụ
Dizel Engine Oil mkpofu
Dizel Engine Oil distillation
dizel mmanụ Producer
Dizel Oil Change Machine
Dizel Oil distillation Machine
Dizel Oil Producer
Dizel Oil imu
Distinllation dizel Producer
Light dizel Oil Producer
Motor Oil Change Iji dizel Oil System
ji Oil Change Iji dizel Oil Plant
Imefusị dizel Oil Producer
Imefusị Oil Change Iji dizel Oil Plant
Waste Oil Iji dizel Producer
Black Engine Oil Iji dizel Oil distillation Mac ...